မိမိတို့ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုတဲ့-Root android without PC v1.9 Apk For Android - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Android Root > မိမိတို့ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုတဲ့-Root android without PC v1.9 Apk For Android
မိမိတို့ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုတဲ့-Root android without PC v1.9 Apk For Android
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 11:48 PM Android application, Android Root
Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာRoot android without PC v1.9 Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် မတ် ၃လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် update အသစ်လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုဘဲ ဒီကောင်လေးနဲ့Root ဖောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးရဲ့ဗားရှန်းကတော့ v1.9 ရှိပြီး ၊ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ Size: 5.99Mb သာရှိပါတယ် Android Version 4.0.3 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ဖုန်းများမှာထည့်သွင်း install လုပ်၍အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
- Basic Information about your device (you can find every help inside the app on how to find these)There are hundreds of tested and working phones/tablets on our compatibility list! And even if your phone is not on this list we're offering other push button solutions on how to root your android without any need ofacomputer!
မိမိတို့ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရာမှာ ကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုတဲ့-Root android without PC v1.9 Apk For Android Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:48 PM Rating:5Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာRoot android without PC v1.9 Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် မတ် ၃လပိုင်း နောက်ဆုံးထွက် update အသစ်လေးရလ...